🏖I-LUXURY LOFT COTTAGE ENTSHA E-MANITOU BEACH🏖
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguProwess Property Management
Yiba namava okuphefumla ukutshona kwelanga kwikhabhathi yethu entsha yodidi oluphezulu ebekwe eManitou Beach. Ngaphandle kokuhamba ngesikhephe, ukuhamba ngenqanawa, i-kayaking, kunye ne-paddleboarding, unokuthatha ithuba lolwandle olunamanzi anetyuwa-indawo enkulu yokuphumla. Ungahambahamba eWellington Park, uhambe phezu kweebhulorho zeenyawo, kwaye ucelomngeni ngokwakho ngebala legalufa elinemingxuma eli-9. Ungonwabela iimuvi kwindawo yemidlalo yeqonga kunye nemidaniso yasehlotyeni kwiDanceland yembali.
Ikhabhinethi esanda kwakhiwa inamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elinye eligcweleyo, kunye nendawo yomlilo yombane. Igumbi lokulala lokuqala yibhedi elingana nokumkanikazi kumgangatho wokuqala, ngelixa igumbi eliphezulu lineebhedi ezimbini ezinobukhulu bokumkanikazi. Ikhitshi igcwele isitovu/ioveni, imicrowave, isitya sokuhlamba izitya, ifriji, iwasha kunye nesomisi. Igumbi lokuhlala linescreen esisicaba seTV, iWiFi enesantya esiphezulu, kunye nesofa etofotofo. Idesika inombono ophefumlayo wechibi kunye nebar-b-que exhotyiswe ngegesi. Kukwakho nendawo yokupaka eyaneleyo. Ingakwazi ukuhlalisa ngokukhululekileyo ukuya kwiindwendwe ezi-6, kunye nobuninzi be-8, iyenza ilungele abantu abangabodwa, izibini kunye neentsapho.
Sithanda ukukwazisa ukuba ikhamera yokhuseleko ifakiwe kwiveranda engaphambili (ngaphandle) ekungeneni okungundoqo ukuze ukhuseleke.
4.92 ·Izimvo eziyi-26
Umbuki zindwendwe ngu- Prowess Property Management
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$399